Pinda chikoro, mubatanidzwa, kana zita renetwork
Ona Enzanisa 0
About the [[Type]]
Ruzivo rweMitauro yeVadzidzi veChirungu
Koreji uye Kugadzirira Basa
Kubudirira kweVadzidzi kunosanganisira zvese kugona kwevadzidzi uye kutora mukana kwevadzidzi. Wekugona kwevadzidzi matanho kunyangwe vadzidzi vakasangana kana kudarika giredhi-nhanho zviyero uye zvinotarisirwa. Kutora chikamu kwevadzidzi kunotora kana vadzidzi vakatora chikamu mukati uye vakapedza ongororo yenyika. Vadzidzi chete vanopedza gore rakawanda rechikoro vakanyoresa muchikoro ndivo vanosanganisirwa pakushuma mashandiro evadzidzi. (Dhata dhairekodhi: 2018-2019 chikoro chegore)
Vadzidzi vekambani iyi vakaita sei kuongororwa kwenyika?
Matanho ehunyanzvi emudzidzi kana vadzidzi vakasangana kana kudarika giredhi-nhanho zviyero uye zvinotarisirwa.
Chirungu / Mitauro Ruzivo rwehunyanzvi
Nyika Avhareji 47.9%
Chirungu / Mitauro Ruzivo rwehunyanzvi Chikamu 3-8
Mujaho / Tsika
Nhema / African-American
Hawaiian kana Pacific Islander
Performance mune Kukurukurirana
Nyika Avhareji 47.8%
Kudzidzira Mathematics Chikamu 3-8
Magiredhi 4 &amp; 6
Nyika Avhareji 47.4%
Sayenzi Ruzivo Magiredhi 4 &amp; 6
Giredhi 10 (Biology)
Nyika Avhareji 38.6%
Sayenzi Ruzivo Giredhi 10 (Biology)
Kufundwa Kwemagariro Evanhu
Nyika Avhareji 46.0%
Kufundwa Kwemagariro Evanhu Giredhi 5
Nyika Avhareji 87.3%
Kuverenga Unyanzvi Giredhi 3
Vadzidzi vari mubato iri vanoita sei vachienzaniswa nehurumende dzepakati tarisiro yeChirungu / Mutauro Nyanzvi neMathematics kugona?
Zvinangwa zvepakati zvinoratidza zvinotarisirwa kufambira mberi kwegore rega kusvika pakuronga zvinangwa zvenguva refu zveunyanzvi.
Ndeapi mazinga ehunyanzvi ari vadzidzi mukambani ino ari kuratidza?
Matanho ane girini dhigidhi anoratidza kupfuura zviyero zvinoratidzira kubudirira kubudirira kwegiredhi-nhanho zviyero uye zvinotarisirwa.
Chirungu / Mitauro mitauro 3-8
Mathematics Giredhi 3-8
Sayenzi Giredhi 4 &amp; 6
Sayenzi Giredhi 10 (Biology)
ISTEP + Kuita
Chirungu / Mitauro Zvekuita Giredhi 10
Ndeapi matanho ekutora chikamu mukambani ino paongororo yenyika?
Kutora chikamu kwevadzidzi kunotora kana vadzidzi vakatora chikamu mukati uye vakapedza ongororo yenyika.
Chirungu / Mitauro Yekutora Kwechikamu
Nyika Avhareji 99.6%
Chirungu / Mitauro Yekutora Kwechikamu Chikamu 3-8
Iperesenti yevadzidzi vari kutora chikamu mune imwe nzira yeChirungu / Mitauro Yekuongorora mune mamakisi 3-8
Nyika Avhareji 97.3%
Chirungu / Mitauro Yekutora Kwechikamu Giredhi 10
Iperesenti yevadzidzi vari kutora chikamu mune imwe nzira yeChirungu / Mitauro Yekuongorora mune giredhi 10
Kubata kweMasvomhu Chikamu 3-8
Ipesenti yevadzidzi vari kutora chikamu mune imwezve masvomhu kuongororwa mune mamakisi 3-8
Nyika Avhareji 97.5%
Kubata kweMasvomhu Giredhi 10
Ipesenti yevadzidzi vari kutora chikamu mune imwezve masvomhu kuongororwa mugiredhi 10
Nyika Avhareji 98.6%
Kubata kweSainzi Magiredhi 4 &amp; 6
Nyika Avhareji 84.4%
Kubata kweSainzi Giredhi 10 (Biology)
Tarisa iyo Yegore Performance Report (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f2400-standard.pdf
Dzidza zvakawanda nezvekuita kwevadzidzi pane dzidzo yenyika yekufambira mberi kwedzidzo. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
Dzidza zvakawanda nezvevadzidzi vepachikoro chepamberi muIndiana. http://www.elacindiana.org/data/elac-annual-report-interactive-dashboard/
Indiana Dhipatimendi reDzidzo
Tsvaga Chikoro uye Cheku Mushumo weDatha Reports